Jizọs Na-erube Isi Mgbe Niile | Kụziere Ụmụ Gị Ihe
GỤỌ NKE Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Ahanta Ajië Albanian Altai Alur Amharic Arabic Armenian Assamese Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Balinese Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Dairi) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Biak Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bomu Boulou Bulgarian Bété Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chokwe Chol Chopi Chuabo Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Diola Douala Drehu Dusun Dutch Edo Efik Emberá (Catío) English Esan Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Galician Garifuna Georgian German Gitonga Greek Greenlandic Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Gujarati Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Japanese Javanese Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Laotian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Lovari Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mandjak Maninkakan (Eastern) Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Mende Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Nepali Ngabere Ngangela Nias Nicobarese Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pemon Pennsylvania German Piaroa Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Rapa Nui Rarotongan Romanian Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Southern Greece) Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sarnami Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Serer Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Soli Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Sranantongo Sunda Susu Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tlapanec Toba Tojolabal Tok Pisin Tongan Toraja Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Wolof Xhosa Xârâcùù Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ọ̀ na-adịrị gị mfe irubere papa gị na mama gị isi?— Ọ naghị adịcha mfe. Ị̀ ma na Jizọs rubeere Jehova isi, rubekwara papa ya na mama ya isi?— I nwere ike ịmụta ihe n’aka ya. Ihe ị ga-amụta ga-enyere gị aka ịna-erubere papa gị na mama gị isi, a sịgodị na ọ na-esiri gị ike. Ka anyị mụọ gbasara Jizọs.
Tupu Jizọs abịa n’ụwa, ya na nna ya bụ́ Jehova nọ n’eluigwe. Ma, o nwere papa na mama mgbe ọ bịara n’ụwa. Aha papa ya bụ Josef, aha mama ya abụrụ Meri. Ị̀ ma otú ha si bịa bụrụ papa ya na mama ya?—
Jehova bufere Jizọs n’afọ Meri. Otú Meri si tụrụ ime Jizọs bụ ọrụ ebube. Ma, ọ bụ otú ahụ ụmụaka si ebu n’afọ mama ha ka Jizọs si buo n’afọ Meri. Mgbe ihe dị ka ọnwa itoolu gara, Meri mụrụ Jizọs. Otú ahụ ka Meri na di ya bụ́ Josef si bụrụ mama na papa Jizọs.
Mgbe Jizọs dị naanị afọ iri na abụọ, o mere ihe gosiri na o ji obi ya niile hụ nna ya bụ́ Jehova n’anya. Josef na-adị akpọ ndị ezinụlọ ya aga Jeruselem maka Ememme Ngabiga. Ọ bụ ememme ha ji echeta otú Jehova si napụta ndị Izrel n’aka ndị Ijipt. Mgbe Jizọs dị afọ iri na abụọ, ya na papa ya na mama ya na ụmụnne ya gara Jeruselem maka ememme ahụ. Mgbe ha na-alọta, Josef na Meri ahụghị Jizọs. Ị̀ ma ebe ọ nọ?—
Gịnị mere Jizọs ji nọrọ n’ụlọ nsọ?
Ha chọọrọ ya gaghachi Jeruselem. Obi erughị ha ala maka na ha ahụghị ya. Ma, ka ụbọchị atọ gachara, ha hụrụ ya n’ụlọ nsọ. Ị̀ ma ihe mere Jizọs ji nọrọ n’ụlọ nsọ?— Ọ bụ maka na ọ ga-amụta banyere nna ya bụ́ Jehova n’ebe ahụ. Ọ hụrụ ya n’anya, chọọkwa ịmụta otú ọ ga-esi na-eme ihe dị ya mma. Mgbe Jizọs toro, ọ nọkwa na-erubere Jehova isi. Mgbe Jizọs ma na irubere Jehova isi ga-esiri ya ike nakwa na a ga-ata ya ahụhụ, ọ nọgidekwara na-erubere ya isi. Jizọs ò rubekwuuru Josef na Meri isi?— Ee. Baịbụl kwuru na o rubeere ha isi.
Olee ihe ị mụtara n’aka Jizọs?— I kwesịrị ịna-erubere papa gị na mama gị isi, ọ sọgodị ya ya bụrụ na o siiri gị ike. Ị̀ ga na-erubere ha isi?—
Ndị Efesọs 6:1
Ndị Hibru 5:8
Olee otú Josef na Meri si bịa bụrụ mama na papa Jizọs?
Olee ebe mama na papa Jizọs hụrụ ya?
Gịnị ka ị mụtara n’aka Jizọs?